Qaramada Midoobey Oo Dalal Shisheeye ku Eedeysay Jebinta Cunaqabateynta hubka Ee Saaran Liibya.
Baaritaan aan wali la shaacin oo ay Qaramada Midoobey sameysay ayaa ku eedeysay waddamada Urddun, Turkiga iyo Imaaratka Carabta inay si joogto ah u jebinayaan cunaqabateynta ah ee saaran dalka Libya, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee AFP.
Waxaa sidoo kale lagu soo warramay in tallaabadaas ay ku lug leeyihiin ciidammo ka socdo Chad iyo Suudaan oo ku sugan Libya.
Warbixinta Qaramada Midoobey oo ay aragtay AFP ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in dhinacyada ku dagaallamayo Libya ay helaan hub, taageero dhanka farsamada ah iyo taageero ay ka helayaan dagaalamayaal shisheeye.
Baaritaanada oo xaqiiq ah ayaa lagu wadaa in golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey ay ka doodaan dabayaaqada bishan.
Arbacadii ayay aheyd markii BBC-da laanteeda Af-Carabiga ay sheegtay in waddanka Imaaraadka Carabta uu haatan ku socdo baaritaan la xiriira weerar lagu qaaday muhaajiriin ku sugnaa Libya kaddib markii diyaarad dagaal oo laga leeyahay dalalka shisheeye ay duqeyn ku qaadday halkaas, waxaana weerarkaas ku dhintay 53 qof oo muhaajiriin ah kuwaas oo ku sugna xeryo ku yaal Libya.
Dowladda Imaaraadka ayaan wali ka hadlin arrintaasi.
Qaramada Midoobey waxay weerarkaasi ku tilmaantay in uu noqon karo dambi dagaal.